Xog dheeraad ah : Qarixii Maanta ka dhacay Wasaaradda Arimaha Gudaha (Sawirro) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Xog dheeraad ah : Qarixii Maanta ka dhacay Wasaaradda Arimaha Gudaha (Sawirro)
July 7, 2018 admin823
Dhanka kale Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in tirada dadkii ku dhintay qaraxa ay gaarayaan illaa 12 ruux, halka 22 ay ku dhaawacmeen. Xog la helay ayaa sheegaysaa in laamaha ammaanka Dowlada ka war hayeen in Weerar kusoo wajahan yahay saddex xurmood midkood, xuramahaas ayaa kala ah Xarunta Wasaaradda Arimaha Gudaha, Xarunta Ha’ayadda Socdaalka iyo Jinsiyadda iyo Miqaayad u dhow Hotel Sayid.
Dadka Qaraxaan ku geeriyooday waxaa ka mid ah Maxamed Axmed Ilkacase oo ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda Arimaha Gudaha, horeyna usoo noqday Xog-haynta Wasiirkii arimaha gudaha Xildhibaan Cabdiraxmaan Odawaa. Xarunta Otto Otto ayaa waxaa ku yaalla xarumaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga, waana goob aad ammaankeeda loo ilaaliyo, waxaana isa soo taraya su’aalo la iska weydiinayo oo ku aadan sida ay ku suura gashay weerarka intaas la eg in xarunta lagu soo qaado.
Tagged muqdisho otto otto qarax qarax xooggan Wasaaradda arimaha gudaha
IMF oo dowladda Soomaaliya ka taageeraysa tayeynta Shaqaallaha
RW Itoobiya Abiy Ahmed oo Booqashadii ugu horeysay ku tagay Asmara (Sawirro)
True character of Prime Minister Kheyre – Khadra Duale